KannuNaUm Ny Labels Divay - Famolavolana
Ny Labels Divay
Alahady 12 Desambra 2021
Ny Labels Divay Ny famoronana labels KannuNaUm dia aseho amin'ny fomba voarindra sy kely farafaharatsiny, azo amin'ny alàlan'ny fikarohana famantarana izay afaka maneho ny tantarany. Faritany, kolontsaina ary finiavan'ireo mpandresy amin'ny tanin'ny lavalava dia ampidirina amin'ireo labila roa mifandrindra ity. Mihatsara ny zava-drehetra amin'ny famoronana voaloboka centenarian izay natao miaraka amin'ny teknikan'ny volamena araraka amin'ny 3D. Sarin-tsary momba ny firafitra izay maneho ny tantaran'ny divay sy miaraka amin'izy ireo ny tantaran'ny tany izay nateraka, Ogliastra Land the Centenaries in Sardinia.
Anaran'ny tetikasa : KannuNaUm, Anaran'ny mpamorona : Giovanni Murgia, Anaran'ny mpanjifa : Cantina Ogliastra.
Stocker Seza Alatsinainy 17 Janoary
Reflexio Ny Tetikasa Typography Alahady 16 Janoary
Simplest Happiness Ny Sary Mihetsika Momba Ny Varotra Asabotsy 15 Janoary
Fanadihadihana famolavolana ny andro Alatsinainy 17 Janoary
Tantara momba ny andro Alahady 16 Janoary
Famolavolana ny andro Asabotsy 15 Janoary
Mpamorona ny andro Zoma 14 Janoary
Ekipa mpamorona ny andro Alakamisy 13 Janoary
Ny Labels Divay Giovanni Murgia KannuNaUm